मानसिक रोग कसरी पत्ता लगाउने ? - Samudrapari.com
मानसिक रोग कसरी पत्ता लगाउने ?
काठमाडौं – नेपालमा मानसिक समस्याका बिरामी चिकित्सकलाई देखाउन अझै पनि हिच्किचाउँछन् । कति त परिवारमा कुरा गर्नसम्म पनि डराउँछन् । कतिपय समाजले थाहा पाउला कि भनेर चिकित्सककहाँ जचाउन जाँदैनन् । तर, यसरी मानसिक समस्यालाई लुकाएर समस्यालाई अझ बढाउनुभन्दा समयमै निको बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।